3. Ikamelo elikhulu neligqamile eduze kwedolobha - I-Airbnb
3. Ikamelo elikhulu neligqamile eduze kwedolobha
Podkowa Leśna, mazowieckie, i-Poland
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Ewa
U-Ewa Ungumbungazi ovelele
Leli kamelo lingalala abantu abangu-1 kuya kwabangu-3. Kunombhede oyedwa olala abantu ababili, usofa ovulekayo, futhi singafaka umatilasi owengeziwe phansi uma kudingeka.
Endlini yethu sesivele siqashisa ngamakamelo amabili nge-airbnb, lokhu kungokwesithathu. Zonke izivakashi zinegumbi lokugezela elilodwa.
Thina njengababungazi sikhona cishe sonke isikhathi, kodwa sizama ukunikeza izivakashi zethu ubumfihlo obuningi ngangokunokwenzeka. Yonke intaba itholakala ezivakashini kuphela.
Phakathi nokuhlala kwakho e-Horseshoe, singathanda ukuthi uzizwe usekhaya, ngakho-ke senza yonke imizamo yokuqinisekisa ukuthi amakamelo ahlanzisiswe ngokuphelele, imikhiqizo yesidlo sasekuseni ishaya khona futhi iyikhwalithi engcono kakhulu.
Kuzohlala kukhona ikhofi, itiye, okusanhlamvu, ubisi, namaqanda ashaya khona ekhishini.
Esikhathini sakho sokulahla ikhishi lethu, udinga kuphela ukuvumelana ngezinto zokusebenza - othi nini ;)
Uma unemibuzo noma ukungabaza, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi:) Futhi khumbula ukuthi asikho isimo esingenaso isixazululo! ;)
Indlu iwuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka kusitimela sendawo i-WKD, okuzokuyisa enkabeni yeWarsaw njalo ngemizuzu eyi-15. Isikhathi sokuya enhloko-dolobha imizuzu engama-40 kuphela, futhi ngemoto (ngaphandle kwesiminyaminya) - cishe imizuzu engama-30.
Kunabantu abangaba ngu-4,000 edolobheni lakithi, sinepaki elihle ledolobha - ihlathi elincane, nesonto elihle elinechibi, amaphigogo kanye nengadi enhle ngendlela emangalisayo. Ziningi izindlela zamabhayisikili edolobheni. Okunye okukhangayo ukuba seduze kwehlathi laseMłochowski.
E-Grodzisk Mazowiecki, eqhele ngamakhilomitha angu-5 kuphela, kunedamu lokubhukuda elingaphakathi, i-cinema kanye ne-bowling.
I-Podkowa Leśna kwakuyidolobha lokuqala e-Poland ukuthola isimo sedolobha lasengadini.
Le ndawo inezinkuni, sinezindlu eziningi ezinhle ezindala lapha futhi kukhona ubuso obudumile phakathi kwezakhamuzi.
Amakhonsathi, izinkulumo nemibukiso kubanjelwe ezindaweni zangaphakathi ezigciniwe zendlu yase-Iwaszkiewicz eStwisko.
Omakhelwane bethu bangama-squirrel, ama-hedgehogs, futhi izinyoni bezilokhu zisiculela kusukela ngo-5 ekuseni.
Mina nomyeni wami sisendaweni. Yiba sendaweni 24/7. Uma singakwazi ukukhuluma noma sishiye u-, indodakazi yethu u-Magda uhlezi efonelwa, naye uhlala endaweni, ngakho uma kwenzeka kuba nezinkinga uyatholakala ukusiza.
UEwa Ungumbungazi ovelele